Isikhala njalo sengathi kukhona kude futhi nhlobo. Ingabe kuyiqiniso lokhu? Siyini ngempela incazelo lucebe kwegama elithi "isikhala"? Njengoba asathuthuka nalawo asethuthukile wathandeka kakhulu lo mqondo izikhathi ezahlukene?
Space - Izwi elafika kithi kusukela ngesiGreki, kulapho kusho "ukuze, ukuze, ukuthula." Ngo isiRashiya Kwathi nabanye ukuguqulwa wonke umqondo walo. incazelo abahlakaniphile basheshe kwegama elithi "isikhala" kusichazamazwi bese Ozhegova Dahl ukubizwa ngokuthi 'ukuthula', "yonke", kodwa baphathwe njengoba isikhala ngale ozungeze umhlaba.
Leli gama livele eGrisi lasendulo. Waba yingxenye isiko nefilosofi, okusho ngobunye nokusizana oda zomhlaba. Ubiza yonke, isimiso saphezulu. Nokho, ngisho nangaleso sikhathi abantu abanentshisekelo astronomy kanye cwaningo mayelana nezinto zasemkhathini, ososayensi abaningi baye bathola isikhala nge yonke (ngomqondo wesimanje).
Kwaphela isikhathi eside imiqondo zefilosofi nezesayensi cishe delimited. Cosmos yayiyiminyaka elikhulu umzimba owodwa nge umphefumulo nengqondo, futhi indoda - ingxenye yalo. Ngesikhathi esifanayo ososayensi baye bazama ukuthola indlela ukunyakazisa amaplanethi, izinkanyezi nemithala wathola. Lokhu kuye kwenzeka Ephakathi. Nokho, imiqondo emibili ngokwethukela niyaqhelelana.
Esikhathini sethu, incazelo lucebe kwegama elithi "isikhala" kuyinto kakhulu umqondo yesayensi kusho indawo nangaphandle Umhlaba nomkhathi wawo. Ngalo mqondo ngokuvamile igama elithi "isikhala" lisetshenziswa.
Space: I incazelo yegama elithi ifilosofi
Palm ekunqumeni incazelo yegama elithi kufanele inikwe isayensi yezinkanyezi. Kodwa lisho ukuthini igama elithi wesibili namanje kwalondolozwa njengemiBhalo isigaba zefilosofi. Libuye umqondo oyisisekelo ku elifanayo ezintweni eziphilayo, futhi ubonakala isakhiwo ebalulekile esesikhundleni izakhiwo ezithile.
Philosophy ibheka izici eyinhloko yonke umhlobiso kanye ahlukaniswe, yokwehlayo ecacile izingxenye, dynamism. Kusolwa ukuthi unesikhathi relatedness ngekulandzelana njalo. Lokhu, kuholela ukuvumelana kanye nokuphelela yobuhle.
Isikhala kufaniswa oda, rationality, ngakho uyabikelwa uma uza. Kungaba ukubikezela ngisho bese belingisa. Ngokuphambene, kusobala Chaos, okuyinto ecekela phansi, amandla ongalawuleki.
Modern incazelo lucebe kwegama elithi "isikhala" endaweni sokuqala sihilela isikhala interstellar, okuyinto akufakwanga endaweni kule planethi yethu. Igama elithi liyasetshenziswa ethi "eduze isikhala" futhi "isikhala esijulile". Eyokuqala isikhala ukuthi ihlola abantu, yesibili libhekisele ezikude insimu - izinkanyezi nemithala.
Lesi sigaba emkhathini eduze nakude uvele engxenyeni ekhulwini XX yesibili, lapho i-United States ne-Soviet Union ngenkuthalo kahle isikhala. Khona-ke baye inqubekelaphambili kakhulu ekuhloleni zenyanga, wadala kumasathalayithi lokuqala yokufakelwa. Le ndoda yayingeve okokuqala emkhathini interstellar okokuqala siwela satellite eMhlabeni zemvelo.
Mifopoeticheskogo lokusungula Kuhilela nomqondo isikhala. Lapha, kanye imibono yefilosofi lasendulo, ihlobene yonke. Izinganekwane ukuthi atshele kokudaliweyo umhlaba abizwa ngokuthi cosmogony.
Iningi lazo ezibikwa olwandle olulodwa kulo zonke ekuphileni izalwa. Abanye abantu, isibonelo eScandinavia, yonke izalwa esiphithiphithini. Lokho kuvela ukudideka jikelele kusukela oda emhlabeni nokuzwana.
Nokho, ukwakha oda emhlabeni - akugcini. Badinga ngandlela-thile ukuphatha. Ngakho-ke, ngo-izethulo eziningi zasendulo isikhala ophethe ubuNkulunkulu. Ngo zamaGreki, uZeyusi wenza lo msebenzi. Manje Motifs basezinganekwaneni savela ibe inkolo. Kodwa okushiwo uhlala - umyalelo emhlabeni nokuzwana elawula yaphezulu okukhulu.
"Njengezinye inkukhu ekuqaleni": ukubaluleka phraseologism. Isisho ngegama elithi "inkukhu"
Luyini ulimi elula ukufunda isiRashiya futhi angaphandle?
"Kule ndaba," kungakhathaliseki ukuthi ukhefana kuyadingeka? Izibonelo imithetho
Kuvunyiwe noma kuvunyelwene: kanjani ukubhala? Kwezinye izimo, le ebhalwe "bavumelana", futhi lapho - 'ekhonsathini "?
Umlando of China Ingxenye yesakhiwo
Umsuka, incazelo kanye nencazelo yegama elithi "scoundrel"
Amaphekula - kungcono ... ukuzibulala ekuhlaseleni. umthetho olwa-ubuphekula
Isifuba esomile ezinganeni. Yini futhi indlela yokuphatha
Cream of semolina. Indlela yokwenza ukhilimu lemon semolina
Salad "Alenka" - iresiphi
Lasekuqaleni iresiphi Bayliss ekhaya